“Dhamsi dubarti Oromoo madali fi ulfina qaba onnee ilee namati bita”
Dr. Abiyyi fi Dr. Lammaa Magarsaa, mee waantokkon isiniin mariyadha. Dhaaboliin siyaasaa Oromoo biyya alaatii galan hundi Oromiyaa irratti wal hagurmeessan. Dhaboliin siyaasaa warra Amaaraa AG7fi kan biroommoo naannoodhuma isaaniitti biyya Amaaraatti wal hagurmeessani. Warri kibbaas Kibbumatti wal hagurmeessani. Warri Tigrayis Naannoodhuma isaaniitti wal hagurmeessani. Isa booddee aanaa irraa kaasanii wal calalanii filannoo isa dhumaaf of haaqopheessan malee hundinuu Finfinneetti wal guuruun isaanii Oromoof gufuufi morkii to’achuuf rakkisaa ta’eef biyyatti saaxila jedheen yaada.
Hundumtuu naanno isaaniitii filamanii bakka bu’ummaa argatanii gara Finfinneetti haadhufani. Kanaan booda Oromoon dhimma isaanii wajjin atakaaroo uumuufi yeroo isaa itti gubuuf hin qabu. Dhimmi sabaafi sablammii achuma naannoo isaaniitti dhumachuu qaba. Oromoon hojimanee kan isaa hojjetamoo isaanii wajjin Finfinnee keesa akka adurreefi hantuutaa wal ariya? Achumatti nuuf qabaa. Goolii isaanii isa bara Dargii Finfinneetti fiduun isaanii kan hin oolledha.
Aktivistoota warra of jaallachiisuuf jecha dubbii marqanis nurraa dhaabsisaa. Waan dubbatan itti yaadanii haadubbatani. Finfinneen magaalaa gudditti Oromiyaafi bakka teessoo Fedaraalaati malee dirree wal morkiifi Abbaa biyyummaa Oromoo laamshessuufi dhabamsiisuuf irratti koratanii ta’uu hin qabdu. Oromoon qeyeefi abbaa biyyummaa isaa irratti eenyuu wajjiniyyu tadaraaddaruu hin qabu hin fedhus. Oromoon biliqii dhigga ilmaan isaatiin argate deebisee dukkaneessuuf qophii miti. Jarrinmoo faallaa kanaati. Wanta walfaallessu akkasii kana attamittiin araarsuuf jettaniiti AG7 waraana isaanii fudhatanii Finfinneetti akka galan hayyamaa jirtantu gaaffii natti ta’aa jira.
Mee taatota mootummaa darban sadeen irra deebi’aatii yaadadhaa. Kan darbe dhiifamaan yoo irra darbameyyuu gatuunis gaarii miti. Irraa baratanii isa fuulduraaf eeggannoo godhachuun waanuma jiru waan ta’eef. Kan naqa sagal ulee wal fakkaataan dhaanamu horii irraa adda hin ta’u. “ሸሽቶ ማምለጥ እያለ መፈንከትን ምን አመጣው" isa jedhun filadha. Achumatti nuuf qabaatii nagaan akka waliin jiraannu nuuf godhaa.
Duutiif gadadoon Oromoo irraa dhaabbachuu qaba. Oromoon qeyee isaa irratti ilmaan habashaa lamuu akka irratti geeraruuf carraa kennuuf qophee natti hin fakkaatu. Nagaa dhaan eenyuun waliinuu jiraachuufimmoo akkuma kanaan dura godhaa ture godhuuf homtuu isa hin daangessu. Finfinneen kan Oromooti. Oromoon qeyee isaa irratti eenyuu waliinuu morkachuun barbachisaa miti. Garuu waan walootiif Finfinnee irratti waliin hojjechuun gaarii dha.